गर्मी कम गर्न दिउसै टाेकियाेमा हिउ पारेपछि ! | | Neplays.com
By Neplays	 Last updated Sep 16, 2019
शुक्रबार जापानको राजधानी टोकियोको तापक्रम २५ डिग्री आसपास रहेको थियो । मध्यान्हमा गर्मी भइरहेको थियो तर टोकियोमा अकस्मात हिँउ पऱ्यो ! गर्मी भइरहेको बेला एउटा खेलस्थलमा भएका दर्शकहरूले हिउँ परेको अनुभव गरे ।
सुन्दा अचम्म लाग्ने यो घटना काल्पनिक होइन बरु हिँउ भने कृतिम हो । सन् २०२० को ओलिम्पिकको समयमा धेरै गर्मी भएमा कसरी गर्मीबाट बच्न सकिन्छ भनेर जापानले नक्कली हिउँ पार्ने प्रविधिको परीक्षण गरेकाे हो । सी फरेस्ट वाटरवे खेलस्थलको दर्शकदीर्घामा झन्डै तीन सय किलो नक्कली हिउँ छरिएको थियो । यसले तापक्रम र आद्रता कम गर्न सहयोग गर्छ कि गर्दैन भनेर परीक्षण गरिएको हो । जुलाईमा टोक्योको तापक्रम ३५ डिग्री सेल्सियस पुग्छ त्यसले आगामी ओलिम्पिकमा दर्शकहरूको स्वास्थ्य समस्या नपरोस् भने जापानले नक्कली हिउँको परीक्षण गरेको हो ।
तर यसको नतिजा भने उनीहरूले अपेक्षा गरे अनुरूपको नभएको हुनसक्छ किनभने हिउँ पार्नु अघि र पछिको तापक्रम ठ्याक्कै एउटै रह्यो। समितिका ताकासी ओकामुराले नतिजा अपेक्षाकृत नभएपनि हिउँका अरू फाइदा भएको बताए। यो मेसिनको फाइदा भनेको दर्शकहरूले रमाइलो मानेका छन् । सङ्गीत कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गरिने हिउँ पार्ने मेसिनले १५ मिटरसम्मको दुरीमा हिउँ पार्न सक्ने बताइएको छ। खर्च भने बताइएको छैन।
सन् २०१३ मा टोक्योलाई ओलिम्पिक आयोजना गर्न जिम्मा दिइएपछि जापानले कुहिरो लगाउने मेसिनदेखि छाताटोपीसम्म परीक्षण गरेको छ। जापानमा हालैका ग्रीष्म मौसमहरूमा देखिएको उच्च तापक्रमले गर्मीका बारेमा चिन्ता बढाएको छ। सन् २०१८ मा गर्मीका कारण एक सातामा कम्तीमा ६५ जनाको मृत्यु भएपछि जापान सरकारले प्राकृतिक विपत्ति घोषणा गरेको थियो।
२०२० टोकियो ओलिम्पिक खेलकुद जुलाई २४ देखि अगस्ट ९ सम्म जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजना हुँदैछ । यो खेलस्थलमा ओलिम्पिकका रोइङ् र कनूइङ्‍का खेलहरू खेलाइने योजना छ ।